All Sports - Part 126
NOC NSC Sports Ministry
स्काइरनर वर्ल्ड सिरिजमा मीरा राई तेस्रो
नेप्लेज, ११ भदौ । नेपालकी अल्ट्रा धाविका मीरा राई ५२ किलोमिटर अल्ट्रा दौडमा तेस्रो वरियाता हासिल गरेकी छन् । इटलीमा आइतबार भएको स्काइरनर वर्ल्ड सिरिजमा मीराले तेसो स्थान हासिल गरेकी हुन् । ८० किलोमिटरको अल्ट्रा दौडमा भने उनी विश्व…
एशियाली खेलकूदः नेपालकाे साेमबारको प्रदर्शन पनि खराब
नेप्लेज, ११ भदौ । एशियाली खेलकूद अन्तर्गत सोमबारका खेलमा पनि नेपालको प्रदर्शन उत्कृष्ट हुन सकेन् । नेपाली खेलाडीहरु एक पछि अर्को खेलमा पराजित हुँदै प्रतियोगितबाट बाहिरिएका छन् । टेबल टेनिस टेबल टेनिसको टिम इभेन्टमा नेपाल पराजित भएको छ । …
इन्डोनेसियामा नेपाली खेलाडीको लगातार हार, अन्तिम अाशा कराते र प्याराग्लाइडिङमा
नेप्लेज, ११ भदौ । एसियाली खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सको ८०० मिटर दौडमा सहभागिता जनाएकी नेपाली खेलाडी सरस्वती भट्टराई हिट चरणबाटै बाहिरिएकी छिन् । हिट थ्रीमा प्रतिष्पर्धा गरेकी सरस्वतीले निर्धारित दूरी २ मिनेट १२ दशमलब ५८ सेकेण्डमा पूरा…
खेलकुद बुलेटिन भदौ १०
१८औं एशियाडः ताराको राष्ट्रिय कीर्तिमान, करातेमा कमजोर प्रदर्शन कायमै
नेप्लेज, १० भदाै । एशियाली खेलकुदमा आइतबार पनि नेपाली खेलाडीहरुको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । पदकको आशा गरिएका खेलहरु कराते तथा बक्सिङ अन्तर्गत आइतबार भएका स्पर्धामा नेपालले गतिलो चुनौति पेश गर्न सकेन । तर, प्याराग्लाइडिङमा भने टिम…
१८औं एशियाडः भारत्तोलनमा ताराको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार
नेप्लेज, १० भदाै । १८औं एशियाली खेलकुद अन्तर्गत भारत्तोलनको महिला ७५ केजीमाथि तौलसमूहमा नेपालकी तारादेवी पुनले भने तीन राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन् । आइतबार भएको स्पर्धामा ताराले समग्रमा १७५ केजी भार बहन गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान…
विश्वरुपाले एशियाडमा खेल्न नपाएकोमा गुरु हरि रोकायाको टिप्पणीः यो त हदै भयो
नेप्लेज, १० भदौ । आफ्नी चेली विश्वरुपा बुढाले एशियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला १० हजार मिटर स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनु राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चरण लापरबाहीको नमूना भएको टिप्पणी प्रशिक्षक हरिबहादुर रोकायाले गरेका…
विश्वरुपा बुढाले एशियन गेम खेल्न पाइनन्
काठमाडाैं, १० भदाै । इण्डोनेसियामा जारी १८औँ एशियाली खेलकूदअन्तर्गत एथलेटिक्सका दुई नेपाली खेलाडी प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित भएका छन् । नेपाली खेल पदाधिकारीले समयमै नेपाली खेलाडीको नाम दर्ता भएको वा नभएको बारे ध्यान नदिँदा उनीहरु…
प्याराग्लाइडिङः क्रसकन्ट्रीको पहिलो चरणमा नेपाल तेस्रो
नेप्लेज, ९ भदाै । १८अाैं एशियाली खेलकुद अन्तर्गत प्याराग्लाइडिङको टिम क्रसकन्ट्री बिधाको स्पर्धा शनिबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो चरणको खेल सकिँदा नेपाली पुरुष टोली तेस्रो स्थानमा छ । नेपालले पदकको आशा गरेको यस स्पर्धामा नेपालभन्दा अघि दक्षिण…
एशियाली खेलकूदका लागि अन्तिम खेलाडी नेरिशको विदाई
ललितपुर, ९ भदौ । इण्डोनेशियामा जारी १८औं एशियाली खेलकूद अन्तर्गत स्केटबोर्डमा सहभागि हुने खेलाडीलाई बिदाई गरिएको छ । २९ खेलमा सहभागिता जनाएको नेपालका अरु खेलाडीहरु इण्डोनेशिया पुगिसकेका छन् । आज विदाई गरिएका स्केटबोर्डका एकमात्र खेलाडी…
Previous 1 … 124 125 126 127 128 … 177 Next
पारसले छक्का प्रहार गरेकाे बल ४५ मिनेटसम्म हिलाेमा खाेज्न जाँदा !
फुटबल खेलाडी काे कहाँ क्वारेन्टिनमा छन ?
विश्वकप छनौटमा नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने सबै खेल दशरथ रंगशालामा…
कीर्तिपुर मैदानमा खेलाडी बस्ने स्थान बनाउन क्यानलाई चाैतर्फि तनाव
मुलपानी क्रिकेट मैदानका लागि एक कम्पनीकाे टेन्डर, अख्तियारमा उजुरी…